एजेन्सी । किन अनुहार चमकहिन बन्छ रु किन छाला रुखो हुन थाल्छ ? धेरैको मनमा यहि प्रश्न उब्जिन्छ । त्यही कारण अनुहारको हेरचाहमा बढी नै ध्यान दिन थाल्छन् । महंगा सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्ने, फेसवास लगाउने, अनुहार धुने जस्ता काम गर्न थाल्छन् । तर, त्यतिले मात्र अनुहारको चमक र्फकन्छ त ? अनुहारको प्राकृतिक चमक फर्काउनका […]
काठमाडौं – ब्युटी पार्लर क्षेत्रमा आफ्नो बिशिष्ट स्थान बनाएको सिटिईभिटीसँग सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौंको रविभवन स्थित रोज ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर तथा रोज सिप विकाश तालिम केन्द्रको स्थापना दिवसको २० औं वार्षिक उत्सब भव्यताका साथ मनाएको छ । बरिष्ट ब्युटिसियन एवम् रोज ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर तथा रोज सिप विकाश तालिम केन्द्रकी अध्यक्षत सोनी […]
अनुहारको सुन्दरता कायम राख्न अनेक उपाय अपनाउने कतिपय व्यक्ति हातगोडाको सुन्दरतामा खासै चासो राख्दैनन् । एकातिर अनुहारको केयर नगर्नु तथा अर्कोतिर घाम र धुलोले डढ्नु र फुट्नु हातको सुन्दरता बिग्रिने कारण बन्छ । तपाईंको पनि अनुहारको तुलनामा हात नराम्रो भएको छ भने घरमै उजिल्याउन सक्नुहुन्छ : काँचो दूध हातको छालाको रंग सफा गर्न तथा चम्किलो […]
पोर्चुगल, २१ पुस: नेपाली महिला समाज पोर्चुगलले सोमबारदेखि नेपाली समुदायका दिदीबहिनीलाई निःशुल्क सौन्दर्यसम्बन्धी तालिम शुरु गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विश्व नै आक्रान्त बनेपछि रोजगार गुमाएका र नेपालबाट नयाँ आएका दिदीबहिनीलाई फुर्सदको समय सदुपयोग गर्नका साथै सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य उद्देश्यले तालिम आयोजना गरेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । पोर्चुगलको राजधानी लिस्बन […]
काठमाडौँ – प्रत्येक दिनको काम र तनावपूर्ण जीवनका कारण हरेक व्यक्ति केही न केहि समस्याले चिन्तित हुने गर्छ । भटमास यस्ता ६ समस्याको अचुक अपाय हो जसले जराबाटै समाप्त गर्दिन्छ । अनि जाडोको समयमा यसलाई भुटेर पनि खान सकिन्छ । त्यसै गरी तरकारीको रुपमा पनि यसको सेबन गर्न सकिन्छ । भटमासको नियमित रुपमा प्रयोग गर्नाले […]
दाँतको सुरक्षा र हेरचाह कसरी गर्ने ? डाक्टर यसो भन्नु हुन्छ…
दाँतको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयलाइ धेरैलाइ सताउने गर्छ ? शरिरका अन्य अंग जस्तै दाँत पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण अंग हो । मुखको स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउने हो भने सम्पूर्ण शरिर स्वस्थ रहन्छ । गुलियो खानेकुरा, चकलेट र बजारमा पाइने रेडिमेड खाने कुरा लगायतले सानै उमेरमा दाँत बिग्रने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले आज हामी तपाईलाई वरिष्ठ दन्तरोग […]
सुष्मा महरा । तिहार नेपालीहरुको दशैं पछिको सबैभन्दा ठूलो चाड हो । यो पर्व काग तिहार देखि शुरु भएर भाइटीकासम्म (पाँच दिन) मनाइन्छ । पाँच दिनसम्म मनाइने भएकाले यसलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ । यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाका घरमा आतिथ्य ग्रहण गरेको हुनाले यी पाँच दिनलाई यमपञ्चक भनिएको हो । यही दिन भगवान धन्वन्तरीको जन्म भएको […]